Indlela Kuhlangana a Beautiful kubekho inkqubela kwi-Intanethi. I-Frisky
Yintoni ungakwazi kwenza ukuba ungummi kakhulu ukuba neentloni waza unconfident boy? Andazi apho ukufumana umphefumlo mate. Impendulo ngu-obvious: kuhlangana girls kwi-Intanethi. Nayiphi na guy kule iplanethi ngu dreaming ukuhlangabezana a beautiful kubekho inkqubela kwaye qala dating kunye naye. Thina ndivuma kakhulu ukuva ukuba wonke omnye boy unako ukuze ngayo, ngoko ke, apha sine langoku ezahlukeneyo iincam kwaye amaqhinga ka-chola-phezulu mastering. Sifuna imali ukuba ufuna ukuchitha ezininzi ixesha kuyo yonke ihlela loluntu networks, viral zephondo kunye nje surf nabo, nangona ungakwazi kuhlangana umntu a anamashumi phinda-phinda. Akukho nto nzima. Nje ukufumana dating zephondo kuluhlu, khetha i-site ukuba ufuna ukuthanda kakhulu kwaye qala chatting. Uyakwazi ukufumana enye uluhlu okanye sebenzisa Facebook, Instagram, Itwitter, njalo-njalo. Kulungile, xa ulungele nge dating site okanye nayiphi na enye loluntu womnatha, ke ixesha mthetho. Nazi zihlanganisene abanye tips for a ngempumelelo incoko kwaye kunjalo iziphumo ezilungileyo.
Soloko layisha phezulu eyakho iifoto. Kumele elungileyo umgangatho kwaye iingcaphephe bonisa yakho personality. Nawe kanjalo azidingi ukwenza albums kunye stupid amagama”Kum,siyi kwi-indalo”njalo njalo. Makube ezimbalwa iifoto, kodwa elihle ngokwaneleyo. Akukho mfuneko ukubhala phantsi yakho yonke biography okanye funny stories ukususela kwixesha elidlulileyo.
Ukubhala malunga ngokwakho njengoko succinctly, briefly kwaye interestingly. Oku kuya kuba kuqala ulwazi ukuba kubekho inkqubela ubona kwindlela yakho iphepha. Zama ukufumana yakhe anomdla kwaye hooked. Bhala ezimbalwa oqaqambileyo amazwi ngoko ke, ukuba yena sele a banqwenela ukuba ndimbuza imibuzo kwaye ukuqhubeka incoko. Musa pretend umntu ongomnye. Ukuba usenama-ufuna ukwazi njani ukuba ahlangane a kubekho inkqubela kwi-Intanethi kwaye hook yakhe, impendulo ilula kakhulu: nje kuba ngokwakho. Ngelixa umncinci, kubalulekile captivating. Akunazo ukuba invent na stories, dlala silly iindima kwaye uya kuba obungunaphakade tension. Kwaye ngoko ke, uza kuba njengoko relaxed njengoko kunokwenzeka kwaye uqinisekile kwi-ngokwakho. Yintoni enye into ingaba umntu kufuneka kubekho inkqubela. Eyona nto ayiyo ukuba umgca ukuba tediousness. Ekubeni ngokwakho akuthethi ekubeni ngathi ufuna kunye nabazali bakho okanye abahlobo. Khumbula ukuba imbono yakho ukuba inzala i kubekho inkqubela, kwaye ingabi ukufumana enye onesiphumo, umhlobo. Nkqu ukuba ngoku uqinisekile ukuba unxibelelwano kunye ishumi girls ngexesha elinye, ngamnye kubo kufuneka bazive njengoko ukuba wenze enye. Ngamnye kubo sele yakhe owakhe umsebenzi, yena kunye imisetyenzana yokuzonwabisa, owakhe indlela ubomi. Kwaye oko kuthetha ukuba indlela ngamnye kubo kufuneka jonga njenge okhethekileyo omnye. Ibonisa ukutyeba komhlaba kwaye imagination. Girls uthando ingqalelo nje sifuna abantu besenza. Ke ngoko, zama kangangoko unako ukubonisa yakhe inzala yakho kwi-budlelwane nabanye. Ezi elula iincam ziya kukunceda ukuba zifikelele elungileyo iziphumo chatting nge-girls, kwaye mhlawumbi ngenye imini uya kuhlangana umphefumlo wakho mate
← Ngenisa free Incoko akukho yobhaliso
Izinto Khumbula ukuba Xa Kufuneka Ahlangane Elungileyo Guy Emva Toxic Budlelwane →